Lalana Ambilobe-Vohemar: ho vita godirao afaka roa taona | NewsMada
“Tsy maintsy vita mialoha ny fe-potoam-piasako ity lalana Ambilobe-Vohemar ity”, hoy ny filoha Rajoelina. Hatao godirao tanteraka ary haharitra roa taona ny asa.
Tonga tany Ambilobe, ny asabotsy 13 avrily teo, ny filoha Rajoelina, nijery ny fanombohana ny asa, ny lalana Ambilobe-Vohemar (RN 5A), taorian’ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana taty Antananarivo, ny herinandro lasa teo. Mitentina 155 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola avy amin’ny firenena sinoa, hanaovana ny lalana mirefy 151 km. Raha atao ny salanisa ankapobeny, tombanana ho maherin’ny 1 tapitrisa dolara ny tentimbidin’ny lalana iray kilometatra. Hatao godirao tanteraka ny lalana, miampy tetezana vaovao miisa dimy ary havaozina ny folo efa misy. Hanatanteraka azy ny orinasa sinoa China Road and Bridge Corporation (CRBC), ary haharitra roa taona ny asa. Nanamafy izany ny filoha Rajoelina fa “tsy maintsy vita mialoha ny fe-potoam-piasako ity lalana ity”.
Fampandrosoana ny toekarena
Notsindrin’ny filoham-pirenena koa fa zary nofy ratsy sady nanahirana ny mponina any Sava sy any Diana ary ny mpampiasa azy ity lalana ity nandritra ny taona maro. Nilaza ny hanao azy avokoa ny mpitondra nifandimby, saingy tsy nisy tena fanatanterahana azy.
Hitondra fampandrosoana any Diana sy any Sava ny fahavitan’ity lalana mirefy 151 km ity ao anatin’ny fotoana fohy. Hiantraika mivantana amin’ny fiainan’ny mponina, indrindra ny fihariana toekarena, indrindra ny lafiny fambolena, ny varotra, ny indostria. Hitombo koa ny fifanakalozana amin’ny toekarena mivantana amin’ny faritra manodidina, ary hiitatra hatrany amin’ny varotra ivelany satria akaiky ny seranan-tsambon’Antsiranana.
Mandalo kaominina valo ny lalana RN 5A: i Marivorahona, Ambakirano, i Betsiaka, i Maromokotra, i Daraina, i Madirobe, Ampondra, i Vohemar.